Scribblenauts Unlimited 1.13.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 3M - 5M
ဗားရွင္း 1.13.9 လြန္ခဲ့ေသာ3ႏွစ္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Scribblenauts Unlimited
Scribblenauts Unlimited ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
**PLEASE NOTE** In order to play Scribblenauts Unlimited, you must have at least 600 MB of free space on your device.
The award-winning, best-selling puzzle game franchise Scribblenauts is back! Imagine Anything. Explore Everything.
Welcome to an adventure intoawide-open world, where the most powerful tool is still your imagination. Help Maxwell solve robust puzzles across dozens of seamless, free-roaming levels by summoning any object you can think of. Or you can apply adjectives to existing objects and magically transform their properties! Then learn the back-story about Maxwell's parents, 41 siblings (including his twin sister Lily), and how he got his magical notepad.
Note: If you are having any trouble, please contact support.wbgames.com
** Scribblenauts Unlimited ကစားရန်အလို့ငှာ, သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်နေရာလွတ်အနည်းဆုံး 600 MB အထိရှိရမည် ** သတိပြုပါ။
အဆိုပါဆုရ, ရောင်းအားအကောင်းဆုံးပဟေဠိဂိမ်းဂိမ်း Scribblenauts ပြန်ပါ! တစ်စုံတစ်ရာဆိုပါစို့။ အရာအားလုံး Explore ။
အာဏာအရှိဆုံး tool ကိုနေတုန်းပဲသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိရာကျယ်-ပွင့်လင်းဤလောကသို့တစ်ဦးစွန့်စားမှု, မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ Maxwell သင်တို့တွင်အထင်နိုင်ပါတယ်ဆိုအရာဝတ္ထုဆင့်ခေါ်ခြင်းဖြင့်ချောမွေ့စွာအခမဲ့-ရုမ်းမင်းအဆင့်ဆင့်များစွာကိုဖြတ်ပြီးကြံ့ခိုင်ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်ကိုကူညီပါ။ ဒါမှမဟုတ်သင်အတှဲတ္ထုမှ adjective နာမဝိသေသနလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ဥသုံသူတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများအသွင်ပြောင်းနိုငျပါသညျ! ထိုအခါ Maxwell ရဲ့မိဘများ, (သူ၏အမွှာညီမလီလီအပါအဝင်) 41 မောင်နှမများနှင့်မည်သို့မည်ပုံသူသည်မိမိအမှော် notepad တယ်အကြောင်းကိုနောက်ကျော-ဇာတ်လမ်းကိုလေ့လာပါ။
•အားလုံး-နယူးန့်အသတ်ကမ္ဘာ့ဖလား: သင်၏ကစားကွင်းအဖြစ်တိုင်းအဆင့်ကို အသုံးပြု. ပျော်စရာ၏န့်အသတ်နာရီနှင့်အတူတစ်ပွင့်လင်းစကွဝဠာ Explore ။
• Object ကိုစာကြည့်တိုက်: Store မှာယခင်ကလွယ်ကူစွာနှင့်အနာဂတ်အသုံးပြုရန် Maxwell ရဲ့မှော်ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာအရာဝတ္ထုနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုကိုခေါ်။
•မိုဘိုင်းထိန်းချုပ်မှု optimized: To-zoom ကို-စုနှင့်ကြီးမားကစားကွင်းတဝိုက် Two-လက်ချောင်းဒယ်အိုး။ screen ပေါ်မှာမဆိုအရာဝတ္ထုအပြန်အလှန်နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ။
•သီးသန့်အသစ်ဇာတ်ကောင်: Hipster လင်ကွန်းသို့မဟုတ် Robo-အိုင်းစတိုင်းနှင့်အတူအချိန် mashup ခံစားကြည့်ပါမယ့်ကော်ပိုရိတ် Werewolf ဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်ကောင်းကင်ဘုရင်မအဖြစ်အထက်မှအုပ်ချုပ်မှုကို!
မှတ်ချက်: သင်သည်မည်သည့်ဒုက္ခရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် support.wbgames.com
Scribblenauts Unlimited အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Scribblenauts Unlimited အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Scribblenauts Unlimited အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
tremblaym1x စတိုး 78 213.52k
Scribblenauts Unlimited ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ပေဟဠိ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Scribblenauts Unlimited အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.13.9
ထုတ်လုပ်သူ Warner Bros. International Enterprises
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.warnerbros.com/privacy
App Name: Scribblenauts Unlimited
File Size: 540.96MB
Release date: 2016-04-13 04:50:20
လက်မှတ် SHA1: A1:5D:EC:A4:29:40:28:09:77:D5:98:80:34:8B:89:42:A3:E2:83:F8
Scribblenauts Unlimited APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ